Johnson 5.5 HP soavalin-dranomasina Tune-Up Project | Outboard Boat Motor Repair
Johnson 5.5 HP soavalin-dranomasina Tune-Up Project
Raha manana fanontaniana na fanehoan-kevitra momba ity 5.5 Johnson HP soavalin-dranomasina, na mitovy Tune-UP Project, azafady hamela azy eto ambany. Ianao dia tsy maintsy Hiditra raha tianao ny hiala hevitra.
napetraky Sean952 amin'ny Mon, 09 / 11 / 2017 - 08: 15
Fidirana ao amin'ny faritra ambany
Efa nijery tsara ny zava-drehetra aho ary tsy azoko mihitsy hoe maninona no averina indray ny môtô iray manontolo ao amin'ny efitrano ambony fa maimaim-poana ny fanombohana, ary rehefa miezaka mamolavola ny tolo-dalàna dia sarotra be izany. Tsy misy mikitika na mandondona ny tabataba, tsy misy toa tsy misy toerana fa tsy fialan-tsasatra fotsiny ... ny fanampiana rehetra dia mahatalanjona.
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 14 / 2017 - 11: 58
Nofatoranao tombo-kase vaovao ve? ...
Nofatoranao tombo-kase vaovao ve? Na dia izany aza, ireo tombo-kase vaovao dia mety hahatonga ny zavatra ho sahirana mandritra ny fotoana fohy. Toy izany ihany koa amin'ny rindrina vaovao. Omeo ora vitsivitsy hivezivezena ary hijerena raha manatsara ny zava-misy.
napetraky Sean952 ny Thu, 09 / 14 / 2017 - 21: 00
Namaly ny Nofatoranao tombo-kase vaovao ve? ... by ttravis
Tsy nanala tombo-kase aho na ...
Tsy namerina tombo-kase na zavatra tao amin'ny faritra ambany aho noho izany.
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 09 / 15 / 2017 - 12: 00
Namaly ny Tsy nanala tombo-kase aho na ... by Sean952
Inona no mitranga raha miezaka ny ...
Inona no mitranga raha manandrana manodina ny orsa amin'ny tanana ianao, na mamatotra tady manodidina azy mba hanandrana ny tady hanombohana izany fomba taloha izany?
Inona koa no mitranga raha maka ny faritra ambany ianao ary manandrana manomboka izany?
napetraky stubnt ny Thu, 03 / 22 / 2018 - 21: 17
aiza no hametrahana tavoahangy rehefa mametraka tery lava?
Manolo ny kofehy sy ny teboka / condensateur aho ao amin'ny 1956 Johnson CD-13A 5.5hp twin.
Miezaka mametraka ny teboka sy ny fotoana fijeriko amin'ny fomba fiasa voltmeter aho.
Aiza no ametrahanao ny fantsom-bokatra hanamarinana ny vanim-potoana sy hametrahana ny banga? Hitako ny sasany miteny, ary ny sasany miteny WOT. Ny sasany milaza fa tsy misy fahasamihafana izany, saingy tsy misy dikany izany amiko.
Ny fantsom-panala dia manosika ny takelaka sy ny marika famantarana, noho izany dia tsy maintsy manova ny toerana misy ilay fantsona.
Inona no zavatra tsy ampy ahy? Misaotra
napetraky raysmythe amin'ny Mon, 04 / 03 / 2018 - 13: 26
Namaly ny aiza no hametrahana tavoahangy rehefa mametraka tery lava? by stubnt
Izaho dia nanao ny 3 hp lightwin ...
Vao avy nanao ny LightWin XHUMX hpm aho ary io no nanosika ahy mandra-pijereko sy nahita fa na dia mihetsika amin'ny takelaka aza ny teboka dia mitoetra ao amin'ny cam, noho izany dia tsy maninona. Raha ny zava-misy, raha manadino ny marika ianao amin'ny fametrahana ny fotoana, raha toa ianao ka manomboka amin'ny toerana "manomboka", azonao atao ny manosika ny pejinanao manerana ny cam amin'ny lafiny iray. Na izany na tsy izany, nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha ny toerana aho ary rehefa vita aho, ny motera azoko naloa dia nihazakazaka toy ny top ... momba ny $ 3 amin'ny ampahany tuneup.
Noho izany, ny tsipika ambany, tsy misy dikany izany, fa mety amin'ny toerana sasany kokoa noho ny hafa, mifototra amin'ny asa atsy an-tanana. Fikoranana falifaly!
napetraky tonyr123 amin'ny Mon, 04 / 01 / 2019 - 09: 59
Nahazo ny zava-drehetra napetraka teo amin'ny toerany aho, ambany fitaovana, fametrahana vaovao ao amin'ny mpametahana, ary ny plug vaovao. Mihazakazaka iray minitra fotsiny izy io ary maty voalohany sy faharoa dia manomboka ny fomba mety maty.
Afaka manampy ahy ve ny olona iray ....
napetraky Fischer amin'ny Mon, 04 / 16 / 2019 - 20: 56
1960 Johnson SeaHorse manampy ny CD-17 Power Unit
Nanana fahafinaretana namerina indray ny 1960 Johnson Seahorse 5.5 aho
Tonga teny amin'ny làlambe aho. Tsy mahita olona iray hizara ny raharaha ary hanala ny biriky ary hanolo ny pistons sy ny peratra. Miezaka ny manandrana ny tenako raha toa ka azoko tsara ihany koa ny pistons sy ny peratra.
Misaotra mialoha mialoha ny fanampianao.
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 06 / 12 / 2019 - 14: 49
Johnson 5.5 HP 4 dia mamerina mamaky video
Nisy olona nametraka fanamarihana fa nitady ny horonan-tsarimihetsika 4 ampahany amin'ny YouTube izy ireo tamin'ny famerenana indray ny Johnson 5.5. Ny fanehoan-kevitra tany am-piandohana dia very noho ny famintinana ity tranokala ity (indraindray mitranga) ary tsy maintsy naverina tamin'ny alàlan'ny backup iray izay roa andro lasa.
Heveriko izany youtube fikarohana dia hahazo ireo horonan-tsary hitadiavanao.
Haka fotoana handinihana azy ireny aho ary azo ampidirina ato amin'ity tranonkala ity.
Miala tsiny, very ny fanamarihana voalohany.
napetraky Paramount1953 amin'ny Mon, 09 / 24 / 2019 - 19: 41
Misy mahalala ve ny kaody loko loko miloko marobe 1958 Johnson 5.5 hp CDL-15? Ary raha eny, inona izany? Efa eo afovoan'ny nanamboarana io motsy INDRINDRA io aho ary rehefa avy nandalina lalina tao anaty môtô aho dia nanapa-kevitra aho hoe: "Inona ny akoho? Mety handoko azy koa ankehitriny." Izay rehetra manampy amin'izany dia tena ankasitrahana. Misaotra anao!
napetraky fabelknap tamin'ny Wed, 09 / 25 / 2019 - 07: 59
Namaly ny Kaody loko hosodoko ho an'ny motera 1958 5.5 hp CDL-15? by Paramount1953
tsy azoko antoka hoe ny volavolan-dalàna hoso-doko, fa vao nividy hoso-doko teo ambany rohy ary nampidirina 1955, tonga dia tsara. bandy dia manana loko hafa.
napetraky fabelknap tamin'ny Wed, 09 / 25 / 2019 - 07: 53
Nanao ny fiovam-pivezena amin'ny paompy aho tamin'ny fiara iray 1955 5.5 HP Johnson Seahorse avy any anaty kamiao voatoto ho an'ny milina fanodinana siphon. Ny olana iray hitako dia ny tsipika banga miala amin'ny fampidirana no hofenoina entona rehefa avy eo ny 1 / 2 ora fihazakazahana. Izany no mahatonga ny fantson-tsolika hijanonana ny pumping amin'ny tsy fahampian'ny dabam-bary amin'ny fantson-tsolika amin'ny tsipika. Nisy olon-kafa efa nanana izany olana izany, sa mba manana vahaolana amin'izany?
Moa ve ny fiovam-po isaky ny torolàlana momba ny rohy eto ambany? Misaotra
napetraky Paramount1953 amin'ny Mon, 09 / 30 / 2019 - 20: 10
Misaotra betsaka noho ny vaovao momba ny loko hoso-doko amin'ity 1958 "Seahorse ity." Nafotsifiko ny loko voalohany tamin'ny loko voalohany tato ho ato, ary mandoza izany rehefa miloko ity. Tsara ity tranokala ity. Novadinao ho "tetik'asa" matihanina kokoa ny tetik'asa fanarenako. Tsara! Manantena aho fa handefa sary tsy ho ela raha vao vita. Misaotra anao indray.